Coolant ဆိုတာဘာလဲ? - Myanmar Automobile and Equipment Directory
ဟိုးအရင်ခေတ်ကားတွေမှာတော့ အင်ဂျင်အအေးခံရည် (Coolant) ကို အသုံးမပြုဘဲ ရိုးရိုးဘုံဘိုင်ရေကိုသာ အသုံးပြုခဲ့ကြတာပါ။ သို့ပေမဲ့ ရိုးရိုးဘုံဘိုင်ရေဟာ အင်ဂျင်အအေးပေးစနစ်နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကို အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ ထိခိုက်ပျက်စီးစေနိုင်တာမို့ ရေအစား Coolant တွေကို အစားထိုးအသုံးပြုလာကြတာပါ။
Coolant တွေကို အများအားဖြင့် Antifreeze လို့ ခေါ်ဝေါ်ကြပြီး Ethylene (or) Propylene Glycol ရယ်၊ ရေရယ်ကို ရောနှောထားတဲ့ အရောအနှောကိုခေါ်တာပါ။
Coolant တွေရဲ့ အားသာချက်တွေကတော့
ရေခဲမှတ် မြင့်ပါတယ်၊ ရိုးရိုးဘုံဘိုင်ရေတွေဟာ0ံC မှာ ရေခဲပေမဲ့ Coolant တွေဟာ0ံC မှာရေမခဲနိုင်ပါဘူး။ ရေခဲနိုင်တဲ့ အအေးပိုင်းဒေသတွေအတွက် ရေအစား Coolant ကို မဖြစ်မနေသုံးစွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Coolant တွေရဲ့ Antifreeze ကြောင့် Coolant တွေဟာ -37ံC ထိရေမခဲနိုင်ပါဘူး။
ရေဆူမှတ်မြင့်ပါတယ်။ ရိုးရိုးရေတွေဟာ 100ံC မှာရေဆူပေမဲ့ Coolant တွေရဲ့ ရေဆူမှတ်ဟာ 100ံC အထက်မှာရှိပါတယ်။ စံသတ်မှတ်ချက်အရ 129°C အထိ ရေမဆူနိုင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် တော်ရုံနဲ့ ရေမဆူ Heat မတက်နိုင်ပါဘူး။
သံချေးတက်စေခြင်း မရှိပါဘူး။ ရိုးရိုးရေတွေဟာ သတ္တုအင်ဂျင်၊ သံအင်ဂျင်တွေကို သံချေးတက်၊ သတ္တုချေးတက်ခြင်းတွေ ဖြစ်စေနိုင်ပေမဲ့ ဒီ Coolant တွေကတော့ သံချေးတက်တာ၊ သတ္တုချေးတက်ခြင်းမှ ကင်းဝေးစေပါတယ်။
Heat Transfer လို့ခေါ်တဲ့ အပူကူးပြောင်းသယ်ဆောင်မှုကောင်းလို့ အင်ဂျင်အပူချိန်ကို သက်သာစေပါတယ်။
Coolant တွေကိုရေရောသုံးရမှာလား၊ ဒီအတိုင်းသုံးရမှာလား?
ယခုလက်ရှိ ကားလောကဈေးကွက်ထဲမှာ ဝယ်ယူရရှိနိုင်တဲ့ Coolant အမျိုးအစား ၂ မျိုးရှိပါတယ်။
Concentrate Type (အဆီရည်)
ဒီ Concentrate Type ဆိုတာကိုတော့ ဈေးကွက်ထဲမှာ အဆီရည်လို့ခေါ်ပြီး ဒီအတိုင်းအသုံးပြုလို့မရပါဘူး ရေရောပြီး အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့်တော့ 50:50 အချိုးဖြစ်တဲ့ အဆီ ၁ ဆ၊ ရေ ၁ ဆ ရောနှောအသုံးပြုရမှာပါ။ ဝယ်ယူထားတဲ့ Coolant ဘူးမှာ Concentrate လို့ရေးထားရင် ရေရောသုံးရမှာဖြစ်ပြီး ထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီက သတ်မှတ်ပေးလိုက်တဲ့ အချိုးအစားအတိုင်း ( 40:60 , 30:70 , 50:50) အစရှိသဖြင့် ရေသန့်နဲ့ ရောနှောအသုံးပြုရမှာပါ။ Concentrate တွေကို ရေမရောဘဲ အသုံးပြုမိရင် အဆီရည်ရဲ့ပြင်းအားကြောင့် ရေတိုင်ကီတွေပေါက်တာ၊ ရေလည်အုံတွေပျက်တာ၊ သံအင်ဂျင်နဲ့ သတ္တုအင်ဂျင်တွေကိုပျက်စီးစေတာတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒီ Pre-Mix Type ကတော့ ထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေက သတ်မှတ်စံချိန်စံညွှန်းအတိုင်း ရေရောနှောပြီးသား အသင့်သုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဝယ်ယူလိုက်တဲ့ Coolant ဘူးမှာ Pre-Mix လို့ပါရင် ရေရောစရာမလိုဘဲ အသင့်သုံးစွဲနိုင်တာဖြစ်လို့ ထပ်မံရေရောလို့မရပါဘူး။ ထပ်မံရေရောလိုက်ရင် Coolant တွေရဲ့ Quality အရည်အသွေးမပြည့်မီတော့ဘဲ စံချိန်စံညွှန်းအတိုင်းအလုပ်လုပ်နိုင်မှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။